We.com.mm - ချောမောလှပကြပေမဲ့ လူမုန်းများတာခံရတဲ့ ကိုရီးယား မိန်းကလေး အဆိုတော် ငါးယောက်
Korea ရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး မိန်းကလေးအဆိုတော် အဖွဲတွေဟာ ကိုရီးယား ပြည်သူတွေသာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးက အားပေးချစ်မြတ်နိုးတာကို ခံရပြီး အောင်မြင်မူ ပိုရရှိကြပါတယ်။
အဖွဲတစ်ဖွဲချင်းစီမှာ Fan တွေ လူ့ကြိုက်များဆုံးဖြစ်သလို ဝေဖန်မူများစွာခံရပြီး လူမုန်းများကြတဲ့ မိန်းကလေး အဆိုတော် တွေရှိခဲ့ပါတယ်။
Twice အဖွဲဝင် Nayeon က အဖွဲ့ထဲမှာ လူ့ကြိုက်များဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ လူမုန်းများတာခံရတဲ့ သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ က idol တစ်ယောက် မဖြစ်ခင်ကတည်းက ကြေငြာမော်ဒယ် တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပြီး အရင်ကတည်းက ရေပန်းစားနေတဲ့ သူလေးပါ။ လူမူဆက်ဆံရေး မကောင်းဖူး ခပ်တည်တည်နေတတ်တဲ့ မျက်နှာထားနဲ့ စတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကို hater တွေက အမြဲထောက်ပြပြီး ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။
တကယ်တော့ သူမက အဖွဲထဲမှာ အကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး အငယ်တွေကို ဂရုစိုက်တတ်သူပါ ။
2. Momoland – Nancy
Momoland အဖွဲ့ရဲ့ center တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး face of the group ဖြစ်သလို ပေါ်ပြူလာအရမ်းဖြစ်တဲ့ သူမက အရမ်းကို ဝေဖန်တာတွေ ခံနေရသူပါ။ သူမရဲ့ Body နဲ့ တိုတိုပြတ်ပြတ် အဝတ်စားတွေ အရမ်းဝတ်ပြီး ကပြဖျော်ဖြေတာကြောင့် netizens တွေ များစွာ အပြစ်ပြောလာကြတယ်။ သူမကို ဝတယ်လို Body shaming တွေ လုပ်တုန်းကဆိုရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး တော့တောင် ငိုခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့ အနေထိုင် မတတ်တဲ့ ပုံစံကြောင့် IDOl တွေကို ကြည်တဲ့ အကြည်တွေကလဲ မရိုသေလေးစား သလို ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါတွေကို သူမ တမင်လုပ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ လက်ရှိမှာလဲ အောင်မြင်မူ ရနေတာနဲအတူ ဝေဖန်တာကို အပြင်းထန်ခံနေရသူပါ။
YG ရဲ့ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူမက IDOL တစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ သူများတွေနဲ့မတူတဲ့ အရည်ချင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိထားပြီး သူမရဲ့ မိသားစုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မဖွင့်ဟတတ်တဲ့ jennie ဟာ အောင်မြင်မူရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေခဲ့ပေမဲ့ သူမရဲ့ စတိတ်ကြောင်းက အဖြစ်ပျက်တွေကို hater တွေက အကြီးကျယ် သတင်းတွေ ဖြန့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အတန်းဖော်တွေကို အနိုင်ကျင့်ခဲ့ဖူးတဲ့ အဖြစ်ပျက်ပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ အတိုက်ခိုက်တွေ များနေတာတောင် အောင်မြင်မူရနေတဲ့ Jennie အတွက် အေဂျင်စီ ကိုက အပြည်၀ ကာကွယ်ပေးနေပါတယ်။
4. Red Velvet – Yeri
Red Velvet အဖွဲမှာ အသက်ငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး အဖွဲရဲ့ နောက်ဆုံး Member ဖြစ်သူ Yeri ဟာ အသက် ၁၉ နှစ်သာရှိပေမဲ့ သူမလဲ အရွယ်နဲမလိုက်အောင် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မူတွေခံနေရတာပါ။ အဖွဲဝင်တွေအကုန်လုံးက အရည်ချင်းတွေ ပြည်စုံရက်နဲ့ ဘာလို သူမကို ထည့်ရတာလဲ ? Visual မဖြစ်သင့်ဖူး စတာတွေကို ပြောခံရပေမဲ့ trainee သက်တမ်းအနည်းငယ်နဲ့ IDOL တစ်ယောက်ဖြစ်လာရတာ သူမအတော်ကံကောင်းလိုဘဲမလား
SinB ကလဲ အဖွဲထဲမှာ အနေအေးပြီး ခပ်အေးအေးနေတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။ တခါတလေ သူမရဲ့ အပြောအဆိုကလဲ ရိုင်းပြတဲ့ အဓိပ္ပယ်ရောက်တယ်လို netizen တွေကပြောကြတယ် ဒါသူမရဲ့ ပုံမှန်ပါဘဲ
သူတိုငါးယောက်ကလဲ တခါတလေ အကြောင်းပြချက် မရှိပါရက်နဲကို မုန်းကြတဲ့ သူတွေ ရှိတယ် ။ဘယ် idol မိန်းကလေးမှ perfect ဖြစ်ပြီးသားဆိုတာ မရှိပါဖူး အရင်က အကြောင်းတွေရှိခဲ့မှာပဲ ။ Fan တွေကလဲ ဒါကိုနားလည်ကြမှာပါ။
မြန်မာပြည်က Swifties တွေသိထားသင့်တဲ့ Taylor Swift ရဲ့ အကြောင်း (၇) ချက်